के तपाईँलाई थाहा छ? हेडफोनमा R र L किन लेखेको हुन्छ ? - IAUA
के तपाईँलाई थाहा छ? हेडफोनमा R र L किन लेखेको हुन्छ ?
ramkrishna October 23, 2017	के तपाईँलाई थाहा छ? हेडफोनमा R र L किन लेखेको हुन्छ ?
हेडफोन लगाएर गीत सुन्न रमाइलो हुन्छ । आजकल सबैको कानमा हेडफोन देखिन्छ । तर तपाइँले ख्याल गर्नु भएको छ ? हेडफोनमा R र L लेखेको हुन्छ ।
Previous Previous post: Theory of Knowledge
Next Next post: पारिजातको जीवनी | Parijat ko jiwani in Nepali